Xogta shirkadda - SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2008.
Tower XY waa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee soo saarayaasha khadka munaarad gudbinta xirfadeed ee galbeedka Shiinaha.Shirkaddu waxay bixisaa qaabab kala duwan oo bir galvanized ah, oo ku takhasusay 500kV iyo munaaradaha khadka korantada ee ka hooseeya, qaab dhismeedka substation, munaaradda isgaarsiinta, qaab dhismeedka tareenada korantada, iwm.
Tower XY waxa ay dabooshaa bed dhan 33,000 mitir oo laba jibbaaran, waxaanay leedahay 10 khad wax soo saar oo toos ah, iyada oo awoodda wax-soo-saarka sannadlaha ahi ay tahay 30,000 oo tan.Maamulka XY Tower waxa uu khibrad balaadhan u leeyahay warshadaha korontada.Dakhliga soo gala shirkadu waxa uu ka badan yahay 20 milyan oo dollar, halka wax soo saarka shirkadu uu si weyn u isticmaalay Shiinaha.
XY Tower waa alaab-qeybiyaha u qalma ee National Grid, Koonfurta Shiinaha Power Grid iyo shirkado badan oo koronto oo caan ah.
XY Tower waxa ay adeeg siisaa boqolaal macaamiil ah oo ka gudbaya dalka.Hadda XY Tower ayaa si degdeg ah u horumarinaysa suuqa dibadda.XY Tower waxay rabta inay siiso alaab tayo leh iyo adeeg xirfadeed macaamiisha aduunka oo dhan.Wada-hawlgalayaashayada XY Tower waxay hore u dabooleen Koonfurta Ameerika, Afrika, Koonfur-bari Aasiya iwm.
XY Tower waxa ay samaysaa ballan ah in aanu had iyo jeer bixino adeeg xirfad leh dhammaan macaamiisheena.Waxaan rajeyneynaa wadashaqeynta adiga.
Waxaan aaminsanahay badeecada iyo adeega aan bixino inay u sahli karaan macaamiisheena inay helaan koronto la isku halayn karo.
Dhismaha cusub ee xafiiska iyo aqoon-is-weydaarsiga ayaa si habsami leh u soo dhamaaday, waxaana la filayaa in xaflada wareejinta la qabto horraanta sanadka 2021-ka.
Warshad cusub iyo dhismo xafiis ayaa bilaabaya in la dhiso, intaas ka dib, awoodda wax soo saarka ugu badan waxay dhaafi doontaa 30,000 tan sanadkii
Warshad cusub oo kulul oo galvanized ah ayaa la dhisay
Aagga warshadda kululaynta kululaynta ayaa ka badan 12,000 m2
La helay ganacsiga aadka u wanaagsan ee magaalada.
Dakhliga sanadlaha ah markii ugu horeysay wuxuu dhaafaa 100,000,000 RMB
Raasamaalkii diwaan gashanaa waxa uu gaadhay 50,000,000RMB, Waxa aanu ku guulaysanay qandaraaskii ugu horeeyay ee suuqa dibada (Sudan).
Wax-soo-saarka sannadlaha ah ayaa markii ugu horreysay gaadhay 10,000 tan oo taawar ah
Wax soo saar cusub ayaa la dhisay Bedka cusubi wuxuu ka badan yahay 30,000 m2 wuxuuna aad uga weyn yahay sidii hore
Hal qayb oo ka mid ah Sichuan XiangYue Tower Co., Ltd.waxaa la helay diiradda saaraya warshadaha munaaradda birta, aqoon-is-weydaarsi la dhisay oo bilaabay inay soo saarto munaaradda khadka korontada
Shirkadda Trading waxay ku guulaysatay qandaraaskii ugu horreeyay ee munaaradda khadka isgaarsiinta
Sichuan XiangYue Shirkad ka ganacsata qalabka korantada ayaa la helay Inta badan ganacsigu wuxuu ka ganacsan jiray transformer, fiilooyinka iyo xadhkaha, hardware-ka iwm.